XOG: ”Nin 5 taliye, labo sano iyo bar ku beddelay Al-Shabaab dagaal kulama jiro ee dantiisa maxay noqon kartaa”! waxa sidaasi yiri… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: ”Nin 5 taliye, labo sano iyo bar ku beddelay Al-Shabaab dagaal...
Muqdisho (Halqaran.com) – Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa markale weerar afka ah ku qaaday Madaxweynaha dowladda Federaalka ah Soomaaliya, Maxamed Cabdilaahi Maxamed (Farmaajo), oo Khamiistii is bedel ku sameeyay Taliyeyaasha Ciidamada.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay inaanu Madaxweynaha Somaliya dagaal kula jirin maleeshiyada Ururka Al Shabaab, haddii uu is bedel ku sameeyay Taliska Xoogga Dalka, xilli ay guulo ka soo hoyeen dagaalada.
Siyaasi Cabdishakuur ayaa marka hore yiri ”Allaha guuleeyo wiilasha iyo hablaha Ciidanka Xoogga Dalka ka tirsan ee dagaalka kula jira Al Shabaab, furamaha dagaalkana ku jira.”
Sidoo kale qoraal uu soo saaray ayuu su’aalo kaga keenay waxa sababay in xilka laga xayuubiyo Taliyihii Ciidanka Xoogga Dalka, General Daahir Aadan Cilmi (Indha-qarshe).
”Waxaase shaki abuuraya sababta ciidankii oo guulo soo hoynaya loo bedelay taliyihii, isagoo weliba jiidda hore ee dagaalka ku jira”, Ayuu yiri Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Warsame ayaa Madaxweyne Farmaajo ku dhaliilay inaanu u jeedin dagaalka ka dhanka ah Ururka Al Shabaab, haddii uu laba sano iyo bar ku bedelay illaa shan taliye.
”Nin shan taliye, laba sano iyo bar ku bedelay Al Shabaab dagaal kulama jiro.” Ayuu yiri Hoggaamiyaha Xisbiga KMG mucaaradka ee Wadajir.
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, Farmaajo ayaa la xusuustaa isagoo saddex bilood uun xilka haya in uu ballanqaaday in dowladiisa ay maleeshiyada Shabaabka kaga takhalusi doonto muddo hal sano oo qura, ha yeeshee ballanqaadkaasi ayaa noqday mid bilaa ficil ah.
weerar Afka ku qaaday